amin`izao fotoana izao, handinihana ny fampiharana ilay fanapahan-kevitr`i Donald trump amin` ny fialan`ny tafika amerikanina any Afghanistan. Na dia mbola sarotra ny mametra ireo fepetra rehetra dia efa hita soritra ihany ny tokony hamerana ilay tondrozotra ho fampiharana izany. Ho an`ireo “talibans” kosa, zava-dehibe tokony hodinihana ny fampihenana ireo teknisianina sivily amerikanina miasa ao Afghanistan sy hialan`ny tafika amerikanina amin`izay any an-toerana mialoha ny fanatanterahana ny fifidianana ho filohan`ny Repoblika any Afghanistan izay hotanterahina ny 01 septambra izao. Somary mitovitovy ihany ny hevitra eo amin`ny rehetra fa ny fampiharana izany sisa no hisalasalana. Tsiahivina fa efa tamin`ny taona 2001 no nidiran`ny tafika amerikanina voalohany tany Afghanistan, izany hoe 18 taona lasa izay.